Mashaariicda Horumarineed ee ka fulay gobalka Gedo sanadka 2017. Q2
By ibrahim Aden shire December 29, 2017
Waxaan qaybti hore kaga warrannay mashaariicdi sanadkaan ka hirgashay magaalooyinka Baardheere iyo Garbahaareey. Waxaan qormadaan ku eegaynaa dagmooyinka Buurdhuubo, Ceelcadde iyo Luuq. Halkaan ka akhri haddi ay qaybti hore ku dhaaftay. https://ibrahim-shire.blogspot.co.uk/2017/12/mashaariicda-horumarineed-ee-ka-fulay.html
Magaalada Buurdhuubo waxay ka mid tahay meelaha ay Shabaabku go’doomiyeen sidaa darteed dad badan oo maalgashan lahaa iyo hayado mashaariic ka fulin lahaa ayaa ka cabsaday. Hasayeeshee waxaa jiro dhowr mashruuc oo ka suura galay qaarkoodna baahida magaalada wax weyn ka badaleen.
Mashruuca ugu muhiimsan ayaa ah garoon diyaaradeed oo dadka deegaanku dhisteen. Awal dagmadu waxay lahayd garoon fiican laakiin magaalada bannaankeeda ku yaalo. Garoonkaas waxaa loo isticmaali waayay cabsida shabaabka magaalada hareerahooda dhooban laga qabo. Dhowr sano oo garoon la’aan ah ka dib, shacabka ayaa is xilqaamay iskoodna u dhagax dhigay garoon cusub oo magaalada aad ugu dhow cabsina aan laga qabin inay Shabaab wax yeeleeyo.
Garoonka oo ay ku baxday lacag ku dhow $40,000 (afartan kun) ayaa si caadi ah u shaqeeyo waxaana isticmaalo diyaaradaha rakaabka ah iyo kuwa ay leeyihiin hayadaha samafalka. Hadda waxaa socdo wajigi labaad ee garoonka kaasoo lagu balaarinayo laguna qurxinayo.
Dhinaca biyaha ayaa iyana shaqo weyn laga qabtay. Buurdhuubo waxaa maro wabiga Jubba dadkuna isaga ayay ka cabbi jireen. Biyaha wasaqda ah ee wabiga toos looga cabbo ayaa keeni jiray xanuunno badan sida shuban biyoodka. Sidoo kale biyaha waxaa lagu dhaansan jiray gaari-dameerro taasoo dadku aad ugu dhib qabay.
Baahidaas ayaa hadda la daboolay ka dib markii hayadda NCA ay samaysay biyo galin wada gaartay xaafadaha. Biyahan ayaa soo maro filter kasaaro shaqinka iyo wasaqda ka hor inta aysan gaarin guryaha. Mashruucaan ayaa noqday mid aad loo mahdiyay horayna aan usoo marin dagmada.
Dhinaca waxbarashada iskoolladi hore ee furnaa waxaa lagu soo kordhiyay shan iskool hoose oo ay hirgalisay HIRDA. Iskoolladaan ayaa la mid ah kuwaan kaga soo sheekaynay qormadii hore, iyada faahfaahin ugu noqo.
Si guud Buurdhuubo sanadkaan uma xumayn marki loo eego xaaladda xayiraadda ee ay ku jirto.
Dagmada Ceelcadde waxaa ilaa sanadki 2016ki gacanta ku hayay xarakada Shabaab. Ilaa waqtigaas waxaa ka mamnuuc ahaa hayadaha samafalka iyo howlaha ay dowladdu qabato. Sidoo kale, waxaan ku dhiirran waayay gacansatadi maalgashan lahayd. Laakiin waxaa jiray howlo muhiim ah oo ay qabteen dadka deegaanku.
Magaalada oo ah mid da’ yar aadna loo dagay wixii ka danbeeyay dhicitaanki dowladda dhexe ayaa baahi weyn u qabtay waddooyin waasac ah oo magaalada isu furo. Waxaa jiray xaafado badan oo isku raran noqday dadkana ku adkeeyay inay si fudud meesha ay rabaan ay ku gaaraan.
Dhibkaas muddada taagnaa ayaa xal laga gaaray waxaana la bixiyay siddeed waddo oo magaalada dhex maro mid ka mid ahna uu yahay jid sidi goobadi magaalada ku wareego (ring road). Mashruucaan oo ay lacag badan iyo muruq xooggan uu u baxay ayaa waxaa gabi ahaanba fuliyay dadka deegaanka oo ay odayaashu hormuud ka yihiin, waxaana injineer ka ahaa Bashiir Jarato oo ah injineer ku xeeldheer howlahaan. Injineer Bashiir iyo injineero kale oo isaga la socday ayaa Xamar ooga soo safray naqshadaynta jidadkaan iyo fulinta mashruucaan. Dhak sii link-iga hoose si aad u daawato warbixin ku saabsan jidadkaan.
Waxaa kaloo jiro in qaarka mid ah qurbajoogta dagmada iyo shaqsiyaad kale ay dhisteen guryo casri kuwaas oo door muhiim ah ka cayaaray bilicda dagmada.
Dagmada Luuq oo ah magaalada ugu qaddimsan gobalka Gedo guud ahaanna ku jirto magaalooyinka ugu faca weyn dalkeenna ayaa muddo dheer helin maalgashi iyo mashaariic horumaneed. Dhawaanahan, ayaase, waxaa kor u kacay howlaha horumarka ee ka socdo dagmada. Xasiloonida ka jirto iyo beeraha liinta ee aad ooga baxo ayaa ah sababta ugu weyn ee soo jiitay maalgashadayaasha.
Ganacsato badan ayaa maalgashatay dagmada kana fuliyay mashaariic muhiim ah. Nasiib darro aqoonta aan u leeyahay dagmada oo yar awgeed, dadaal kasta oo aan sameeyay, waan heli waayay xog rasmi ah oo aan ku kalsoonaan karo kuna saabsan howlaha ay sanadkaan ganacsatadu kusoo kordhisay dagmada. Haseyeeshee waxaa ii suura gashay inaan helo mashaariicda ay fuliyeen hayadaha samafalku.
1: Waxaa la dayac tiray qalabkeedina loo dhamays tiray xarunti dagmada oo muddo burbursanayd. 2: Waxaa la dhisay lana xardhay garoonka kubbada kacta. 3: Waxaa la dhisay xarun ay leeyihiin ururada bulshada dhalin yaraduna qayb ku leedahay. Mashaariicdaan waxaa fulisay hayadda IOM.
Xarunta dagmada Luuq
4: Tuulada Garboolow oo Luuq hoos timaado ayaa laga hirgaliyay ceel biyood solar ku shaqeeyo. Ceelkaan ayaan suura galiyay inay tuulado hesho biyo joogta oo nadiif ah kuwaas oo guri walba u socdo 24ka saacba. Waa mashruuca iila qiimaha badan intii sanadkaan Luuq laga qabtay. Soolarka ayaa looga maarmay matoorki dhalin jiray quwada biyaha soo saarto. Soomaaliya oo ilaahay qorrax ku mannaystay ayaan ka faaidaysan cadceedda, isha ay ka dhaliso quwadda korontada ayaana ah matoorro yar yar oo naafto ku shaqeeyo.
Matoorrada ayaa waxyeello balaaran u gaystay hawada iyo bay'ada, hirgalinta soolarrada ayaana keeni doonto inay yaraato wasaqda halista ah ee ka dhalato qiiqa matoorrada. Mashruucaan waxaa maalgaliyay dowladda Norway waxaana wada fuliyay hayadaha NCA iyo CERID.
Haanta keydka biyaha Garboolow
Sidoo kale HIRDA ayaa iskoolladi aan horay usoo sheegnay oo kale ka dhistay dagmada iyo tuulyiinka hoos yimaado.
Si guud sanadkaan gobalka Gedo wuxuu u ahaa mid wanaagsan. Inkastoo maamulka Jubbaland iyo dowlada dhexe labaduba ay hagradeen, haddana dadaalka dadkeeda dantu bartay inuu isu tashado ayaa keenay in mashaariic muhiim ah la fuliyo. Waxaa socdo dadaal maamul loogu dhisayo gobalka. Haddii lagu guulaysto dhisidda maamul hoosaadyada dagmooyinka waxaa la rajaynayaa in gobalku heli doono mashaariic badan iyo maalgashi bareefat ah.